Blackmagic Design မှအသစ် ATEM Mini ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် ATEM Mini ကိုမိတ်ဆက်
Fremont, California ပြည်နယ် - သောကြာနေ့, 13 စက်တင်ဘာလ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ ATEM Mini ကိုအထူး Skype ကိုကနေတဆင့် YouTube နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ပြချက်များမှတိုက်ရိုက်လွှင့်ခွင့်ပြုပါရန်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ကြေညာခဲ့သည်။ ATEM Mini ကိုကနေနိုဝင်ဘာလ 2019 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း အမေရိကန် $ 295 များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
အဆိုပါ ATEM Mini ကိုပုအပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း IBC 2019 တဲ 7.B45 ။
အသစ် ATEM Mini ကို YouTube ကိုသို့မဟုတ် Skype ကိုသုံးပြီးဆန်းသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ပြချက်များမှတိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစုံကကင်မရာဘဏ်ဍာကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ ATEM Mini နဲ့ဖောက်သည်သိသိသာသာပိုကောင်းအရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေအတွက်4အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုကင်မရာကိုသွင်းအားစုများအကြားတိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်းနိုင်ပါတယ်ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖောက်သည်ကိုတောင် PowerPoint ဆလိုက်တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်း console ကိုထည့်သွင်းဖို့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ DVE built-in တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာဆိုးကျိုးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရုပ်ပုံခွင့်ပြုပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဝန်လည်းရှိပါတယ်။ ဖောက်သည်များမဆိုဗွီဒီယိုကိုဆော့ဖျဝဲကိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်စီးနထေိုငျရနျ, ATEM Mini ကိုတစ်ဦး webcam နဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကို USB output ကိုရှိပါတယ်။ လည်းရှိပါတယ် HDMI projector ကိုဗွီဒီယိုကိုထုတ်။ မိုက်ခရိုဖုန်းသွင်းအားစုအင်တာဗျူးနှင့်တင်ပြချက်များများအတွက်အရည်အသွေးမြင့် desktop နဲ့ထိုး MICS ခွင့်ပြုပါ။
ATEM Mini ကိုနောက်ဘက် panel ကိုပေါ်မှာရှိသမျှဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆက်သွယ်မှုနဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း control panel ကိုအခြေစိုက်ဒီဇိုင်းပါရှိပါတယ်။ ရှေ့ panel က, သတင်းရင်းမြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအသံသွင်းအားစုညှိအဖြစ်ဗီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဘို့ခလုတ်အသုံးပြုရလွယ်ကူပါဝင်သည်။ အဆိုပါနောက်ဘက် panel ကပါဝင်သည် HDMI ကင်မရာများသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများချိတ်ဆက်မှုအတွက်သွင်းအားစုအပေါင်းအပိုဆောင်းမိုက်ခရိုဖုန်းသွင်းအားစု။ အဆိုပါ ATEM Mini ကို program ကိုတစ်ခုကနေတဆင့် output ကိုဖြစ်ပါတယ် HDMI ဗွီဒီယိုကိုထုတ်အဖြစ် webcam output ကိုများအတွက် USB မှတ်။ ရှေ့ panel ကိုခလုတ်ကြီးမားပြီးခံစားနေဖြင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ, ဒါတင်ဆက်ထားပါတယ်နေစဉ်ခလုတ်သုံးစွဲဖို့က၎င်း၏ပင်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်များမှာလည်းတိုက်ရိုက်အသံရောစပ်များအတွက်အသံရောနှောခလုတ်ရယူပါ။
ဖောက်သည်ရိုးရှင်းစွာပြောင်းလဲစေသို့မဟုတျဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ်များအကြားဖြတ်ဖို့ရှေ့ panel ကိုအပေါ် 1 မှ4label တပ်ထားသော input ကိုခလုတ်မဆိုနှိပ်အဖြစ် ATEM Mini ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဖောက်သည် panel ကိုပေါ်ဖြတ်သို့မဟုတ်အော်တိုခလုတ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်အကူးအပြောင်းသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဖြတ်မတူဘဲ, အလိုအလျောက် button ကိုသွင်းအားစုများအကြားသို့ပြောင်းသောအခါတစ်ဦးကိုရှေးခယျြသောဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုရန် ATEM Mini ကိုပြောပြသည်။ ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအရောင်သို့ကျဆင်းလာ, DVE ညှစ်ခြင်းနှင့် DVE တွန်းအားပေးအဖြစ်အသုံးအများဆုံးပျော်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှုအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကနေရွေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ DVE ရုပ်ပုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ရုပ်ပုံများအတွက်စုံလင်သည်ချက်ချင်း control panel ကိုအပေါ်ခလုတ်ကနေကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံရာထူးတက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးနေဆဲပြင်ပ software ကိုထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်လက်လှမ်းခေါင်းစဉ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်များအတွက်သိမ်းဆည်းထားပင်ရှိပါသည်။
4 လွတ်လပ်သောနှင့်အတူ HDMI သွင်းအားစု, ဖောက်သည်များအရည်အသွေးမြင့်မားစားသုံးသူကဗီဒီယိုကင်မရာများ4အထိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုကိုစံချိန်စံညွှန်းမှာလည်ပတ်လျှင်အားလုံးချိတ်ဆက်သတင်းရင်းမြစ်အားလုံးသွင်းအားစုရုံအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်အသစ်ကကွင်းသို့မဟုတ်တည်နေရာများကိုသွားရောက်လည်ပတ်လျှင်ဖောက်သည်အမည်မသိပစ္စည်းကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဆိုလိုတာကသည်ခလုတ်မှထပ်တူပြုခြင်းကိုပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်။ ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဂီတဗီဒီယိုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများ၏အနိမ့်အလင်းစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးဆိုပါစို့။
ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးလိုက်ဖက်တဲ့သေချာစေရန်, ATEM Mini ကိုရိုးရှင်းတဲ့ webcam အရင်းအမြစ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းကို USB connection ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အဲဒီဖောက်သည်အတွက် plug နှင့်ချက်ချင်းမဆိုဗွီဒီယိုကို software ကိုအတူလုပ်ကိုင်ရနိုင်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲ ATEM Mini ကိုစဉ်းစားသို့လှည့်ဖြားဖြစ်ပါတယ်ဘုံ webcam ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ့်တစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ပါပဲ။ ဒါကအပြည့်အဝ resolution ကို 1080HD အရည်အသွေးအားလုံးဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုအာမခံပါသည်။ တင်ပြချက်များထောက်ပြညွှန်ပြဘို့အထိုကဲ့သို့သောပွင့်လင်းတိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့အထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ် Skype ကိုကဲ့သို့မည်သည့် software ကိုဖောက်သည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ATEM Mini ကို software နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပွင့်လင်း broadcast, XSplit broadcast, YouTube ကိုတိုက်ရိုက် Facebook ကတိုက်ရိုက်, Skype ကို, Twitch တီဗီ, Periscope, တိုက်ရိုက်လွှ, အတွက် Wirecast နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ HDMI program ကို output ကိုပြင်ပအသံဖမ်းသို့မဟုတ်မော်နီတာသို့ ATEM Mini ကိုဆက်သွယ်ဘို့စုံလင်သည်။ ATEM Mini ကိုထိုကဲ့သို့သော HyperDeck စတူဒီယို Mini နဲ့ Blackmagic ဗီဒီယိုအဖြစ်အသံဖမျး Assist ထောက်ခံပါတယ်။ ဖောက်သည်ခလုတ်အစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့် output ကိုရဖို့ပေါင်းအသံအတွင်းပိုင်းအသံရောနှောရာမှနေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ HDMI output ကိုပင်ကြီးမားသောကွင်းဗီဒီယိုပရိုဂျက်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည် ATEM ဆော့ဝဲ Panel ကိုဖောက်သည်ချိတ်ဆက်ထားလျှင်ပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် HDMI ဗီဒီယိုသွင်းအားစုမဆိုကနေတိုက်ရိုက် output ကို။ ယင်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ဂိမ်း consoles စ၏ output ကိုခွင့်ပြုမယ့်အနိမ့်အောင်းနေချိန် setting ကိုလည်းဖွင့် HDMI output ကို။ ဖောက်သည်များထုတ်လွှင့်စတိုင်ရောနှောသက်ရောက်မှုကိုဖွင် အကယ်. switching, အ HDMI output ကိုတစ်ဦးအကူးအပြောင်းမတိုင်မီသတင်းရင်းမြစ် preview ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နှစ်ခုလွတ်လပ်သော 3.5mm စတီရီယိုအသံသွင်းအားစုနှင့်အတူဖောက်သည် desktop နဲ့ထိုးမိုက်ခရိုဖုန်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။2အပိုစတီရီယိုအသံသွင်းအားစုနှင့်အတူဖောက်သည်အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေသည့်အခါနှစ်ဦးစလုံးထိုးမိုက်ခရိုဖုန်းရှိတစ်ဦးနှင့် host ဧည့်သည်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။ ATEM Mini ကိုမှအားလုံးအသံသွင်းအားစုအသံ level ကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်အသံရောနှောသို့သွင်းအားစုအားဖွင့်အဘို့ panel ကိုအပေါ်ခလုတ်များပါဝင်သည်။
အဆိုပါ ATEM Software များထိန်းချုပ်ရေး app ကိုဖောက်သည်ခလုတ် features တွေကျော်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှု get အဖြစ် ATEM Mini ကို၏ဝှက်ထားသောအာဏာကိုသော့ဖွင့်အပေါင်းဆော့ဖ်ဝဲ Mac နဲ့ Windows အတွက်အခမဲ့ပါဝင်သည်။ ATEM Software များထိန်းချုပ်ရေးအမြန်ချိန်ညှိအောင်များအတွက် parameter သည်ပန်းကန်တွေနဲ့အမြင်အာရုံခလုတ် user interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်များပုံမှန်အားကို USB ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်နိုငျသျောလညျးဖောက်သည် Ethernet ကိုအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစုံအသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် ATEM Software များထိန်းချုပ်ရေး၏သီးခြားမိတ္တူကို အသုံးပြု. ATEM Mini ကိုချိတ်ဆက်ရန်အဘို့, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ကိုတောင် XML ဖိုင်များကိုအဖြစ်ခလုတ်ပြည်နယ်ကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဖောက်သည်ကလစ်ပြန်ဖွင့်ထားဖို့လိုပါလျှင်, ဖောက်သည်များပင် Ethernet ကနေတဆင့် HyperDeck disk ကိုအသံဖမျးထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ "မီဒီယာရေကူးကန်" တွင် built ပြားများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖွင့်လှစ်, ခေါင်းစဉ်များအတွက်သီးခြားထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကို RGBA ဂရပ်ဖစ် 20 မှတက်၏တင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်ကိုတောင်နေဆဲထိုကဲ့သို့သောဂရပ်ဖစ် Wipe အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုများအတွက်ဘောင်ခတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ATEM Mini ကိုတောင်ဗီဒီယို output ကိုကနေတစျခုခုတို့ကိုဖမ်းပြီးနှင့်ပြည်တွင်းရေးမီဒီယာရေကူးကန်မှသူတို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ Customer များအလွယ်တကူထည့်သွင်း ATEM Software များထိန်းချုပ်ရေး app ကို အသုံးပြု. နေဆဲစတိုးဆိုင်ဂရပ်ဖစ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည် ATEM Photoshop ကို plug-in ကို အသုံးပြု. Photoshop ဆော့ဝဲထဲကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Photoshop ကို Plug-in ကိုဖောက်သည်စာသားကို update များနှင့်ဂရပ်ဖစ်အစာရှောင်ခြင်းအပေါ်-လေထုအရခွင့်ပြု, ထိုခလုတ်သို့တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော scoreboards အဖြစ်မကြာခဏပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဂရပ်ဖစ်များအတွက်စုံလင်သည်။
သတင်းသို့မဟုတ် On-set တင်ဆက်မှုအလုပျအတှကျ, ATEM Mini ကိုကအရည်အသွေးမြင့် chroma သို့မဟုတ်တောက်ပနှိပ်ရင်တွေ့နိုင်တယ်, ပေါင်းထားတဲ့အပိုဆောင်းမြစ်အောက်ပိုင်း linear keyer တစ်ခု ATEM အဆင့်မြင့် Chroma Key ကိုတပ်ဆင်ထားအဖြစ်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ကိုပင်ရိုးရှင်းစွာအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်နောက်ခံနှင့်အတူ PowerPoint သို့မဟုတ်တခြားဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် keyer အစိမ်းရောင်ထွက်ခေါက်နှင့်နောက်ခံပွင့်လင်းစေမည်အားဖြင့်ခေါင်းစဉ်ထပ်ပြုလုပ်ရန်ကိုသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦး Fairlight အသံရောနှော built-in နှင့်တကွ, ATEM Mini ကိုအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသံကိုရောစပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်စေသည်။ ဖောက်သည်များအားလုံးရင်းမြစ်များမှအသံရောထွေးဖို့စွမ်းရည်ကိုရဒါပြည်တွင်းရေးရောနှော 12 channel များကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းပါရှိပါတယ်။ 8 ရောနှောလိုင်းများမှဖယ်ရှား-embedded နေကြတယ် HDMI သွင်းအားစုတစ်ခုအပိုနှစ်ခုစတီရီယိုအော်ဒီယိုချန်နယ်နောက်ဘက် panel ကိုအပေါ် 3.5mm မိုက်ခရိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် input ကိုဖြစ်ကြသည်နေစဉ်။ တစ်ခုချင်းစီကို input ကိုရုပ်သံလိုင်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး6တီးဝိုင်း parametric EQ နှင့်တွန်း, ကန့်သတ်, ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံတံခါးဝအဖြစ်အပြည့်အဝအားပွတ်ဆွဲပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါ HDMI ဖောက်သည် switch သည်4၏တစ်ဦးချင်းစီရှင်းလင်းနိုင်အောင် output ကိုစစ်မှန်သော "aux" output ကိုဖြစ်ပါတယ် HDMI ဒီ output ကိုမှသွင်းအားစုသို့မဟုတ် program ကိုအစာကျွေးခြင်း။ ဖောက်သည်ကိုပင် "တိုက်ရိုက်" ဟုရန် input ကို 1 ပြောင်းနိုင်သည် HDMI အီလက်ထရောနစ်အားကစားဘို့အနိမ့်အောင်းနေချိန်များအတွက် output ကို။ ဖောက်သည် switching ထုတ်လွှင့်စတိုင်ရောနှောသက်ရောက်မှုကို select လြှငျ, ဖောက်သည်များမှာလည်း output ကိုတစ်ဦး preview ကိုအစာကျွေးခြင်းလုပ်နိုင်, အဲဒါကိုဖက်ပြောင်းရှေ့တော်၌ထိုအရင်းအမြစ်များ၏စိစစ်အတည်ပြုခွင့်ပြု။
"အသစ် ATEM Mini ကို၏ဝိညာဉ်၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း"Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ "ဒါဟာဖောက်သည်သူတို့ကမှာတွေ့ရှိအားလုံးအဖြစ်မြင့်မားတဲ့အဆုံး Switcher အတိအကျတူညီသောလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကို အသုံးပြု. တီထွင်ဖန်တီးမှုကန့်သတ်ဖြစ်နှင့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအထဲမှာဝှက်ထားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့် features တွေရှိပါတယ်, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်သုံးစွဲဖို့လှယျကူတူ ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်း။ အဘယ်အရာကိုဒီကိုဆိုလိုသည်ကအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့သော်လည်း, ATEM Mini ကိုမဖန်မျက်နှာကျက်ရှိ၏! "
ATEM Mini ကိုအင်္ဂါရပ်များ
miniaturized အင်္ဂါရပ်များ control panel ကိုအခြေစိုက်ဒီဇိုင်း။
Youtube ကဲ့သို့သောအားလုံးမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပေါင်းစုံကကင်မရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ပြချက်များများအတွက် Skype ကိုအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
USB က output ကိုတစ်ဦး webcam အဖြစ်လုပ်ကိုင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွဗီဒီယိုက software ကိုထောက်ခံပါတယ်။
HDMI ဗီဒီယိုက output ကိုအစီအစဉ်များကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Mac နဲ့ Windows အတွက်အခမဲ့ ATEM Software များထိန်းချုပ်ရေးပါဝင်သည်။
အပြည့်အဝပါဝင်သည် HD ရုပ်ပုံဆိုးကျိုးများနှင့် DVE အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်ရုပ်ပုံများအတွက် DVE ။
ပန်းကန်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖွင့်လှစ်ခေါင်းစဉ်များအတွက် 20 RGBA ဂရပ်ဖစ်များအတွက်ပြည်တွင်းမီဒီယာ, ။
အစိမ်းရောင် / အပြာရောင် screen ကိုအလုပျအတှကျ ATEM အဆင့်မြင့် Chroma Key ကိုပါဝင်သည်။
ဖြတ်-ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်စတိုင်များ switching ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရောနှောဆိုးကျိုးများအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အသံရောနှော Limited, Compressor,6တီးဝိုင်း EQ နှင့်ပိုပြီးထောက်ခံပါတယ်!
အလိုအလျှောက်စံချိန်စံညွှန်းများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထပ်တူပြုထားအားလုံး HDMI သွင်းအားစု။
Ethernet ဟာထိန်းချုပ်မှု built-in များနှင့် SDK ကိုဖောက်သည် developer ဖြေရှင်းချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အားလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ် ATEM ဟာ့ဒ်ဝဲထိန်းချုပ်မှုပြားနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
ATEM Mini ကိုကနေတာဝန်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအမေရိကန် $ 2019 များအတွက်နိုဝင်ဘာလ 295 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ကုန်ပစ္စည်းအဆိုပါ ATEM Mini ကို၏ဓါတ်ပုံများအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
2019 IBC Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ATEM Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် Blackmagic ဗီဒီယို 12G Assist ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: MultiDyne ရယူသန်းခေါင်စာရင်းဒစ်ဂျစ်တယ်